Maamulihii shirkada DP World ee dekada Boosaaso oo la dilay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMaamulihii shirkada DP World ee dekada Boosaaso oo la dilay
Maamulihii shirkada DP World ee dekada Boosaaso oo la dilay
February 4, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Paul Anthony Fermosa (M), Siciid Maxamed Raage, Wasiirkii Dekadaha Puntland (B) intuu lagu guda jiray munaasabadii la wareegista dekada.
Boosaaso(Puntland Mirror) Maamulihii shirkada DP World ee dekada Boosaaso ayaa waxaa dilay nin hubeysan saakay oo Isniin ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Paul Anthony Fermosa, oo u dhashay jasiiradda Malta, ayaa waxaa toogasho ku dilay nin dhalinyaro ah oo baastoolad ku hubeysan meel dekada u dhow, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka katirsan.
Ninka dilka geystay ayaa waxaa toogtay ilaalada Paul, ilo-wareedka ayaa intaas ku daray.
Wuxuu maamulayay dekeda tan iyo dabayaaqadii 2017, markii DP World ay heshiis la saxiixatay dowladda Puntland si ay u horumariso una maamusho dekeda.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa si dhaqso ah u sheegatay masuuliyada dilkaas, sida ay ku warantay Radio Andalus, oo ah idaacad taageerta.
February 5, 2019 Shirkada DP World oo sheegtay in uu socdo baaritaan ku saabsan dilka madaxii dekada Boosaaso
April 6, 2019 Madaxweyne Deni: Dilkii Paul waxa uu u soo jiiday Puntland dhaawac aad u badan
DP World’s manager at Bosaso port shot dead in Bosaso town
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan asakri oo katirsan ciidamada Puntland ayaa ku dhimatay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen qarac ka dhacay tuulada Af-urur ee Buuraha Galgala maanta oo Jimce ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo [...]